Serivisy tena tsara - AOOD Technology Limited
AOOD dia miezaka manome ny serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifanay. Mandray anjara mavitrika amin'ny dingana famolavolana ny mpanjifantsika izahay, mandinika tanteraka ny tsipika famantarana sy ny herinaratra isan-karazany ao aminy, ny habaka, ny fametrahana azy, ny tontolo iainana ary ny fepetra takiana amin'ny fampisehoana, manome azy ireo sosokevitra arak'asa ary manampy azy ireo hahita ilay vahaolana azo ahodina mihodina --- ny peratra slip.
Ny valiny haingana dia ny takiana fototra ho an'ny mpiasan'ny AOOD tsirairay. Izahay dia mitazona ny fahazoana 24/7 ho an'ny mpanjifantsika ary manome toky fa afaka voavaha amin'ny fotoana fohy ny fanontaniany / ny filany. Rehefa misy fahatarana amin'ny famokarana dia ampandrenesinay ny mpanjifanay amin'ny ora ara-potoana.
Manana antoka ihany koa izahay ary ny politika aorian'ny fivarotana mba hahazoana antoka fa ho voavaha haingana araka izay haingana ny olana tsy ampoizina. Ny vidiny mirary, ny kalitao avo lenta ary ny serivisy tsy miova no homen'ny AOOD ny mpanjifanay.